Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Football - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Football)
450W N'èzí Arena LED Flood Light
450W N'èzí Arena LED Flood Light Site na SMD 3030 LED, nke a 450W na- eduzi egwuregwu stadium na- emepụta ruo 58500lm dị elu (1200W Ebube Kwesịrị Ekwesị) ma zọpụta 88% na ọkụ eletrik nke ọkụ. Egwuregwu Mkpụrụ Egwuregwu Baseball anyị bụ onyinyo n'enweghị onyinyo ma na-egbukepụ ọkụ, na-enye ọkụ ọkụ na-arụ ọrụ...
Iju Mmiri Iju Mmiri 500W 65000lm 5000K
Iju Mmiri Iju Mmiri 500W 65000lm 5000K Bbier na-ewepụta ìhè ọkụ 500W maka nnukwu ụlọ ime ụlọ na n'èzí n'èzí, ma ọ bụ ohere ọ bụla ọzọ dị mkpa nke ọma na ọkụ ọkụ. Ngwá ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ a na-emepụta ihe ọkụkụ na-enye ezigbo ìhè ọkụ na oge efu. IP66 - Nke a na-eguzogide ọgwụ ọkụ na mmetụta na-eguzogide ọgwụ...
600W N'èzí Ada Iju Mmiri Ìhè 78000lm 5000K
600W N'èzí Ada Iju Mmiri Ìhè 78000lm 5000K Bbier na-ewepụta ogwe ọkụ dị n'èzí n'èzí n'èzí n'èzí n'èzí, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ dị mkpa nke ọma na ọkụ ọkụ. Ngwá ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ a na-emepụta ihe ọkụkụ na-enye ezigbo ìhè ọkụ na oge efu. IP66 - Nke a na-eguzogide ọgwụ ọkụ na mmetụta na-eguzogide...
Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Football Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Led Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu 600W Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Cricket Egwuregwu Ngwá Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Hyperselect Egwuregwu Egwuregwu egwu